လက်ဆင့် ကမ်း ရမ္မက်နွံ – Hlataw.com
ယမင်းထွန်းတစ်ယောက် အလုပ်ရှုပ်နေသဖြင့် အနားယူချိန်ပင် မရှိပေ။ အဓိက အလုပ်ရှုပ်ရသည့် အကြောင်းမှာ ညီမ ဝမ်းကွဲ နွယ်နီ့အမျိုးသား၏ တူမဖြစ်သူ ခိုင်သုတ ရောက်နေခြင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ် မတက်ခင် သင်တန်းများ တက်ရန်အတွက် နွယ်နီ အကူအညီတောင်းထားသဖြင့် အိမ်မှာနေရန် ခိုင်သုတအား လက်ခံခဲ့သည်။ အမျိုးသားဖြစ်သူ ကိုဝင်းနိုင်ကလည်း ခရီးထွက်ရသည်က များသဖြင့် ယမင်းထွန်း အဖေါ်ရစေရန် လက်ခံခိုင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ခိုင်သုတ တက်ရောက်လိုသည့် သင်တန်းများအား ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စုံစမ်းကာ အပ်နှံပေးရသဖြင့် မအားလပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အတာ့ထံသို့ပင် မရောက်ဖြစ်ပေ။ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် ဖြစ်သဖြင့် ကလေးနှစ်ယောက်စလုံး အဖိုး အဖွါးထံ အလည် သွားနေ၍သာ တော်တော့သည်။
ခိုင်သုတ အသက်က ၂၀ နှစ် အရပ်က ၅’ ၄” ခန့်သာရှိပြီး ဖြူဖြူ နှင့် ဘောဒီအလန်း လေး။ ပိန်သည်ဆိုသော်လည်း ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား အရှိုက်အဟိုက်များက ကြည့်၍ ကောင်းသည်။ ဆံပင်ကလည်း ယောက်ျားလေးပုံစံ ခပ်တိုတိုလေး ညှပ်ထားသည်။ ရုပ်လေးက ချစ်စရာ အလွန်ကောင်းသော်လည်း သူမသည် ယောက်ျားစိတ် ပေါက်နေသူ တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ထမိန် ဘယ်တော့မျှ မဝတ်တက်ပေ။ အမြဲလိုလို တီရှပ် စုံနှင့် ဂျင်းဘောင်းဘီသာ ဝတ်တက်သည်။ သူမအား ကြွေနေသော ယောက်ျားလေးများကို စိတ်မဝင်စားဘဲ မိန်းခလေးများကိုသာ စိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူမ၏ မိဘများက ယမင်းထွန်း၏ ဆိုင်ကိုလည်း ကူလုပ်ရင်း မိန်းမစိတ် ပေါက်သွားစေရန် ရည်ရွယ်၍ ပို့လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
” မိခိုင်ရေ ” ” အာာာာာ တီလေးနော်၊ ကျွန်တော့်ကို မိခိုင်လို့ မခေါ်နဲ့ဗျာ၊ ကျွန်တော် မကြိုက်ဘူး ” ” ဟဲ့ .. ငါက နင့်ကို ဘယ်လိုခေါ်ရမှာလည်း ” ” သုတလို့ ခေါ်ဗျာ၊ ဘယ့်နဲ့ မိခိုင်တဲ့၊ မိန်းမ နာမည်ကြီး၊ မကြိုက်ပါဘူး ” ” ဟုတ်ပါပြီ သုတရယ်၊ အခု သင်တန်းတက်ရတာ အစဉ်ပြေလား ” ” ပြေတယ် တီလေး၊ စကီလေးတွေ သောက်ရမ်း ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် ” ” ဟဲ့ .. ငါက အဲ့ဒါ မေးတာ မဟုတ်ဘူး၊ သင်ကြားရေးပိုင်းကို ပြောတာ ” ” အဟီးးး အဲ့ဒါလည်း ပြေပါတယ် တီလေးရဲ့၊ ဒိုးပြီ တီလေးရေ၊ ဒီနေ့ ချာတိတ်တစ်ပွေနဲ့ အတူတူသွားမို့၊ နက်ဖန်မှ ဆိုင် ခင်း ကူတော့မယ် ” ” ဟုတ်ပါပြီရှင် .. ကြွ ကြွ ကြွ ..! ” လေချွန်ကာ ထွက်သွားသော ခိုင်သုတအား ကြည့်ရင်း ခေါင်းရမ်းကာ ဆိုင်ခင်းရန် ဈေးသို့ ထွက်ခဲ့သည်။
နေ့လည်ပိုင်း ရောက်သော် ” ယမင်းရေ ” ရင်းနှီးနေကြ အသံဖြစ်သဖြင့် လှည့်ကြည့်လိုက်ရာ ” ဟယ် .. အတာ .. ဘယ် လာတာလည်း .. ” ” ဒီကိုဘဲ ယမင်းရေ၊ အတာ့စီ အလှပြင်မဲ့ သတို့သမီးလောင်းက ဝတ်စုံအပ်ဖို့ အစ ကူရွေးခိုင်းလို့လေ၊ ယမင်းတို့များ စိမ်းကားနေလိုက်တာ၊ အတာ့စီကို မလာတော့ဘူး ” ” မဟုတ်ပါဘူး အတာရယ်- ” ယမင်းထွန်းလည်း ခိုင်သုတအကြောင်း ပြောပြလိုက်သည်။ ” မိန်းမပီသစေခြင်တာများ ယမင်းရယ်၊ အတာ့စီ ခေါ်ခဲ့စမ်းပါ ဟွန်း ဟွန်း ဟွန်း ” ” အတာ နော် ” ” အလှပြင်ပေးလိုက်ရင် မိန်းမ ပီသသွားစေမယ် လို့ပါ ယမင်းရယ်၊ မိန်းခလေးတိုင်း အလှအပ ကြိုက်တယ်လေ ဟဲ ဟဲ ဟဲ ” ” ထားပါတော့ ထားပါတော့ .. ကဲ ဘယ်လိုအစင် ရွေးမလည်း ” အတာလည်း သူ့စိတ်ကြိုက် အစင်ကို ရွေးချယ်ပြီးနောက် ပြန်ခါနီးတွင် ယမင်းထွန်းထံ တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောသွားသည်။ ” ယမင်းရေ၊ အားတဲ့နေ့ အတာ့စီ လာခဲ့ဦးနော်၊ အတာက ယမင်းကို လွမ်းနေတာ ” ယမင်းထွန်းလည်း ဘာမျှ ပြန်မပြောဘဲ ပြုံး၍သာ နေလိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်ထဲမှာတော့ ယားကျိကျိနှင့် အရည်များ စိမ့်ထွက်လာ၏။
ဥပုသ်နေ့ တစ်ရက် ဈေးပိတ်သဖြင့် ယမင်းထွန်းလည်း ရေချိုးပြီး အိမ်ထဲ ဝင်လာစဉ် ဂျက်ကီအား တွေ့ရသည်။ ဂျက်ကီသည် လျှာတန်းလန်းနှင့် သူမအား ကြည့်နေသည်။ ဂျက်ကီ့ ပေါင်ခွစုံတွင်လည်း ခွေးလီး နီနီရဲရဲလေး ချွန်ထွက်နေမှန်း သတိထားမိသည်။ သူမ၏ ထမိန်ရင်လျှားအလှကို တတ်မတ်နေသယောင်ပင်။ ခိုင်သုတ ရောက်လာကတည်းက အလုပ်ရှုပ်နေသဖြင့် ဂျက်ကီနှင့်လည်း မပလူးဖြစ်တာ ကြာပြီ။ ဂျက်ကီ့အနား ဒူးထောက်ကာ လီးနှင့် ဂွေးဥနှစ်လုံးကို အသာလေး ပွတ်ပေးလိုက်ရာ ဂျက်ကီလည်း တဟဲဟဲဖြင့် လုပ်ခါ ယမင်းထွန်း၏ ပါးကို လျှာဖြင့် လျှက်နေသည်။ ဒီကောင် ထန်နေပြီ။ ယမင်းထွန်းလည်း မီးဖိုချောင်ထဲသို့ ဝင်ကာ သခွါးသီး တုတ်တုတ် ကြီးကြီး တစ်လုံးနှင့် နို့ဆီဗူး ယူ၍ အခန်းထဲ ဝင်ခဲ့သည်။ ဂျက်ကီလည်း ခေါ်စရာမလိုဘဲ အမြှီးနန့်ကာ အနောက်မှ လိုက်လာသည်။ အခန်းထဲရောက်သည်နှင့် ရင်လျှားထားသော ထမိန်ကို ချွတ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ပေါင်ဂွနှင့် စောက်ပတ်တွင် နို့ဆီသုတ်ကာ နံရံကိုမှီ၍ ခြေကား ထိုင်လိုက်သည်။
ဂျက်ကီလည်း အထှာနပ်နေသဖြင့် အမြှီးနန့်ကာ လျှာတန်းလန်းနှင့် ယမင်းထွန်း၏ ပေါင်ကြားသို့ ရောက်လာသည်။ ပေါင်ကြားကို တရှုံ့ရှုံ့နှင့် အရင် နမ်း၏။ ဂျက်ကီ၏ နှာခေါင်းမှထွက်သော ထွက်သက်လေက ပေါင်တွင်းသားကို ထိခတ်ရာ ကြက်သီးများ ထ လာ၏။ ဂျက်ကီသည် စောက်ပတ်အား နှာခေါင်း တရှုံ့ရှုံ့နှင့် နမ်းကြည့်ပြီး လျှာဖြင့် လျှက်တော့သည်။ ” ပလတ် ပလတ် ပလတ် ပလတ် .. အအအအ ဟားးးး ကောင်းလိုက်တာ ဂျက်ကီရယ် ရှီး… ဟားး.. ” စောက်ပတ် တစ်ပြင်လုံးအား လျှာကြမ်းကြီးဖြင့် အပြားလိုက် ပင့်သတ်ကာ လျှက်နေသဖြင့် ကလီစားများ ပြုတ်ထွက်မတတ် ကောင်းလွန်းလှသည်။ ဂျက်ကီ နှာခေါင်းမှ မှုတ်ထုတ်သော ထွက်သက်လေသည် ပေါင်တွင်းသားများကို ထိတွေ့သဖြင့် အသည်း အေးခနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားသည်။ နို့ဆီ ကုန်သွားသော်လည်း လျှပ်နေစဲပင်။ ” ပလတ် ပလတ် ပလတ် ပလတ် ရှီးး… ဟားး.. ” စောက်ပတ်ကို လျှက်နေရင်း ဂျက်ကီ၏ လီးနီနီရဲရဲကြီး ရှည်ထွက်လာသည်။
ယမင်းထွန်းသည် စောက်ပတ် အလျှက်ခံနေရင်း ဂျက်ကီ၏ လီးကို ကိုင်ကာ ကွင်းတိုက်ပေးလိုက် ဂွေးဥကို လက်ဖြင့် စွပေးလိုက် လုပ်နေရာ လီးမှာ ပိုမို ရှည်ထွက်လာသည်။ စောက်ပတ်မှ နို့ဆီလည်း ကုန်သွားပြီ။ ယမင်းထွန်း၏ ရမ္မက်စိတ်တွေလည်း ပေါက်ကွဲမတက် ပြင်းထန်လာသဖြင့် သခွါးသီးကို စောက်ပတ်ထဲ ထိုးကာ ခပ်သွက်သွက်လေး သွင်းထုတ်နေသည်။ ဂျက်ကီကာလည်း လျှာတန်းလန်းနှင့် ပါးစပ်မှ တဟဲဟဲ မြည်ကာ ယမင်းထွန်း လုပ်နေတာကို ကြည့်ရင်း လီးက တောင်နေဆဲ။ သခွါးသီးကို ကွန်ဒုံး စွတ်လိုက်ပြီး စောက်ပတ်ထဲမှ ကျွတ်မထွက်စေရန် အဆုံးထိ ထိုးထဲ့လိုက်သည်။
အားး.. ဟား.. ” ပြန်ထုတ်ရ လွယ်ကူစေရန် ကွန်ဒုံး အရင်းကို စောက်ပတ် အပြင်တွင် အစချန်ထားလိုက်သည်။ ဖင်ကို တံတွေးစွတ်ကာ လေးဘက် ကုန်းလိုက်သည်။ စောက်ပတ်ထဲတွင်လည်း သခွါးသီး တန်းလန်းနှင့်။ ” ဂျက်ကီ ဂျက်ကီ အို့အို့အို့ လာ ငါ့အပေါ် တက်ခွစမ်း ” ဂျက်ကီလည်း လိုးနေကြ ဖြစ်သဖြင့် အထှာနပ်ပြီးသားပင်။ ယမင်းထွန်း၏ ဖင်ပေါ် တက်ခွကာ ခါးကြီး ကော့ကော့ပြီး လိုးတော့သည်။ ဂျက်ကီ၏ လီးချွန်ချွန်က ဘယ်အပေါက်မှ မဝင်ဘဲ ယမင်းထွန်း၏ တင်ပါးကိုသာ ထိုးမိနေသည်။ ယမင်းထွန်းသည် ဂျက်ကီ၏ လီးကို လက်ပြန် ကိုင်ကာ ဖင်ပေါက်တွင် တေ့ပေးလိုက်သည်။ ပြီးနောက် ယမင်းထွန်းသည် ဒူးတုတ်ကာ ဝက်ကုန်း ကုန်းပေးလိုက်သည်။ လီးနှင့် ဖင်ပေါက် တည့်သည်နှင့် ဂျက်ကီ အသားကုန် ကျုံးတော့သည်။ ” ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် အအအအ ဇွိဇွိဖေါက်ဖေါက် အအအအ ပြွတ်ပြွတ်ဗွတ်ဗွတ် အအအအ ” ဖင်ပေါက်ထဲ ဝင်ထွက်နေသော ဂျက်ကီ၏ လီးမှာ သေးသော်လည်း စောင့်အား သန်လှသဖြင့် အရသာ ရှိလှသည်။
ကျောပြင်ပေါ် ပွတ်တိုက်နေသော ဂျက်ကီ၏ အမွှေးကြမ်းများက စူးရှလွန်းသော်လည်း အံကျိတ် ခံနေသည်။ ဂျက်ကီလည်း လျှာတန်းလန်းနှင့် ပါးစပ်ကြီးဟကာ တဟဲဟဲဖြင့် ဖင်ကို ကျုံးလိုးနေရာ ယမင်းထွန်း၏ ကျောပြင်ပေါ် သွားရည်များ စီးကျနေသည်။ ” စောင့်စမ်း စောင့်စမ်း ဂျက်ကီ ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် အအအအ .. ဗျွတ်ဗျွတ်ဗွတ်ဗွတ် .. ကောင်းလာပြီ ကောင်းလာပြီ .. ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် .. အအအအ .. အားး.. ရှီးး.. ဟားး.. ” ဂျက်ကီ၏ စောင့်အား သန်မှုကြောင့် ယမင်းထွန်း တချီကောင်းကောင်း ပြီးသွားသည်။
ယမင်းထွန်း ပြီးသွားသဖြင့် ဖင်ပေါက်သည် ပွစိပွစိ ဖြစ်နေရာ ဂျက်ကီ၏ လီးကို ဖျစ်ညှစ်သလို ဖြစ်သွားကာ ဂျက်ကီလည်း ပိုမို သွက်လက်လာပြီး ” ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် .. အအအအ .. ပြွတ်ပြွတ်ဗွတ်ဗွတ် .. အအအအ .. ပျိပျိဇိဇိ .. အီအီအီအီ …. အား.. ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ် .. အောင်မလေးလေ …. ရှီးး… ” ဂျက်ကီ၏ လီးမှ သုပ်ရည်များသာ မကဘဲ ဂွေးစိနှစ်လုံးပါ ဖင်ပေါက်ထဲ ဝင်သွားသဖြင့် အတော် အီသွားသည်။ ဂျက်ကီလည်း တချီပြီးသွားသဖြင့် တဟဲဟဲနှင့် မောနေသည်။ ပြီးနောက် ယမင်းထွန်း၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်။ ဂွေးစိနှစ်လုံး ဖင်ပေါက်ထဲ ဝင်နေသဖြင့် ယမင်းထွန်း၏ ဖင်နှင့် ခွါ၍ မရသေးဘဲ ခွေးဖင်ပူသလို ဖြစ်နေသည်။ ယမင်းထွန်း ဖင်ကို လှုပ်ကြည့်သည်။
” အီအီအီ .. ကိန်ကိန်ကိန် .. အီအီအီ .. အာ ဝူ ” ဂွေးစိနှစ်လုံးအား ညှစ်မိသလို ဖြစ်သဖြင့် ဂျက်ကီလည်း နာသွား၍ အော်လေသည်။ ထို့ကြောင့် ယမင်းထွန်းလည်း မလှုပ်ဘဲ ပြန်ငြိမ်ပေးလိုက်သည်။ ၅ မီနစ်ခန့်ကြာမှ ဖင်ပေါက်ထဲ စိမ်ထားသော ဂျက်ကီ၏ လီးကြီး ပျော့ခွေကာ ကျွတ်သွားသည်။ ဂွေးစိနှစ်လုံးသည် ဝင်လာချိန်ရော ထွက်သွားချိန်ပါ အတော်နာသည်။ ” ဗျွတ်ဗျွတ်ဗလွတ် ဗု .. အူးး ဟူးးး ဟူးး.. ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ် ရှီးး.. ” ဂျက်ကီ၏ လီးနှင့်အတူ သုပ်ရည်များ ဖင်ပေါက်ထဲမှ အံထွက်လာသည်။ သူမလည်း စောက်ပတ်ထဲမှ သခွါးသီးကို ကွန်ဒုံး အစမှကိုင်ကာ ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် မှောက်အိပ်လိုက်တော့သည်။ အာသာပြေသွားပြီလေ။ သင်တန်းမှ ပြန်လာစဉ် အန်တီလေး ယမင်းထွန်း၏ အခန်းထဲမှ ထူးခြားသည့် အသံများ ကြားရသဖြင့် စေ့ထားသော တံခါးကို အသာ တွန်း၍ ကြည့်လိုက်ရာ ” အိုး.. ” ခိုင်သုတ အံ့သြသွားသည်။ အန်တီလေး ယမင်းထွန်း ခွေးနှင့် အလိုးခံနေသည်။ အစပိုင်း ကြောင်အမ်းအမ်း ဖြစ်သွားသော်လည်း နောက်မှ အကြံရကာ ဖုန်း ဖြင့် ဗီဒရို ရိုက်လိုက်သည်။ အန်တီလေး ယမင်းထွန်း၏ အိုးကြီးကို အာရုဏ်ရနေတာ ကြာပြီ။ အခွင့်သာတဲ့တစ်နေ့ သူမ၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက ဝယ်ပေးထားသော လီးတုခါးပတ်ကို ကောင်းကောင်းကြီး အသုံးချရတော့မည်လေ။
ဆိုင်ပိတ်သဖြင့် ယမင်းထွန်းတစ်ယောက် ဝေ့လည် ဝေ့လည်နှင့် ” သော်တာ ” ဗျူတီးစလွန်းး သို့ ဆံပင်ညှပ်ရန် ရောက်ရှိလာသည်။ ဆံပင်ညှပ်သည်က အကြောင်းပြချက်ဖြစ်မှန်း အတာ သိသည်။ ထို့ကြောင့် ညှပ်လက်စ တစ်ယောက် ပြီးသွားသည်နှင့် ဆိုင် ပိတ်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် ယမင်းထွန်းအား ဆံပင်ညှပ်ပေးရင်း ” ယမင်း ” ” ပြောလေ အတာ ” ” ဒီရက်ပိုင်း မတွေ့ရတာကြာလို့ အတာက သတိယနေတာ ” ” ယမင်းလည်း သတိယနေတာ အတာရဲ့ ” ” အတာက ယမင်းရဲ့ ဖင်ကြီးကို သတိယနေတာနော်၊ ယမင်းကရော ဘာကို သတိယ .. ” ” ခစ် .. ခစ် .. ခစ် .. အတာကတော့ လုပ်ပြီ ” ” ဟုတ်တယ် ယမင်းရဲ့၊ အတာတင် မဟုတ်ဘူး၊ အန်ကယ် ဦးဘထွန်းကလည်း ယမင်းနဲ့ တွေ့ခြင်သေးတယ် တဲ့ ” ” အမလေး အတာရယ်၊ အန်ကယ်တို့အဖွဲ့ကိုတော့ လက်လန်တယ်၊ နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကဆို အသက်ထွက်ပြီ အောင့်မေ့တာ ” ပြောသာ ပြောရသည်။ စောက်ဖုတ်ထဲ ယားကျိကျိဖြစ်ကာ အရည်များ စိမ့်ထွက်လာ၏။ အတာ၏ လက်ကလည်း ထိုင်နေသော ယမင်းထွန်း၏ အနောက်မှ သိုင်းဖက်ကာ နို့အုံတွေကို စုပ်နယ်နေ၏။ ယမင်းထွန်းလည်း အတာ၏ လက်ကို အုပ်ကိုင်ကာ ပွတ်သပ်နေမိသည်။
ကာမ စိတ်ဆန္ဒက ဒီရေအလား ထိုးတက်လာ၏။ သူမ၏ယောက်ျား ကိုဝင်းနိုင်ကို သစ္စာဖေါက်နေမှန်း သိသော်လည်း ရမ္မက်နွံထဲမှ ရုံးမထွက်နိုင်ပေ။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အတာ၏ လက်တစ်ဖက်က နို့ကို ပွတ်သတ်ကိုင်တွယ်ရင်း ကျန်တစ်ဖက်က ပေါင်တန်ကို ပွတ်သပ်လာသည်။ ယမင်းထွန်းအား ကြည့်လိုက်တော့ မျက်လုံးမှေးကာ ကြည့်နေသည်။ ပေါင်ကို ပွတ်ရင်း ပွတ်ရင်းနှင့် ထမိန်စက အပေါ်သို့ တဖြည်းဖြည်း လိပ်တက်လာသည်။ ထမိန်စလေးက ပေါင်ရင်းအထိ ရောက်လာသည်။ အတာသည် ယမင်းထွန်း၏ ဝင်းမွတ်နေသော ပေါင်သားများကို ပွတ်သပ်ရင်း တစ်ချက် တစ်ချက် ပေါင်ဂွစုံကို မထိတထိလေး လုပ်နေသည်။ ထိုသို့ ထိလိုက်တိုင်း ယမင်းထွန်းသည် ပါးစပ်ကလေး ဟကာ ကိုယ်လုံးလေး တွန့်တွန့်သွားသည်။ အတာ၏ လက်များက အောက်ခံဘောင်းဘီ အပေါ်မှနေ၍ ယမင်းထွန်း၏ စောက်ပတ် အကွဲလေးက်ု လက်ဖြင့် ပွတ်တိုက်လိုက်သည်။ ယမင်းထွန်း၏ စောက်ပတ်မှ စိမ့်ထွက်နေသော အရည်များ အောက်ခံဘောင်းဘီတွင် စိုနေပြီ။ လက်တစ်ဖက်ကလည်း ယမင်းထွန်း၏ အင်္ကျီအတွင်းထဲ လျှိုကာ ဘရာစီယာ အပေါ်မှနေ၍ နို့အုံကို ကိုင်တွယ်လိုက်သည်။
အနည်းငယ် ကလိပြီးနောက် အတာသည် ယမင်းထွန်း၏ ထမိန်ကို အရင် ဆွဲ ချွတ်လိုက်ရာ အောက်ခံဘောင်းဘီ အနီရောင်လေးအောက်မှ မို့ကြွနေသော စောက်ဖုတ် ဖေါင်းဖေါင်းကြီး ပေါ်လာသည်။ အောက်ခံဘောင်းဘီတွင် အရည်တွေ အကွက်လိုက် စိုနေပြီ။ အတာ တံတွေး မျိုချလိုက်သည်။ ပြီးနောက် ယမင်းထွန်း၏ ရမ္မက်စိတ် ထကြွနေသော မျက်နှာအား ကြည့်ရင်း အင်္ကျီကျယ်သီးများကို တလုံးခြင်း ဖြုတ်နေသည်။ ဘရာစီယာ အနီရောင် သေးသေးလေး အောက်မှ လျှံထွက်နေသော နို့အုံ ဖွေးဖွေးကြီးများ ပေါ်လာသည်။ ဘရာစီယာလေးအား အပေါ်သို့ ပင့်တင်လိုက်ရာ ကြီးမား ဖြူဖွေးသော နို့နှစ်မွှာ ပေါ်လာပြီး နို့သီးခေါင်းများ ချွန်နေသည်။
“ ပြွတ် .. အ .. ဟင်းး..” အတာသည် ယမင်းထွန်း၏ ချွန်နေသော နို့သီးခေါင်းလေးကို ပြွတ်ခနဲ မြည်အောင် စို့လိုက်ရာ ကြက်သီးမွှေးညှင်းများ ထလာပြီး ယမင်းထွန်း၏ ကိုယ်လုံးလေး တွန့်သွားသည်။ နို့စို့ရင်း လက်တစ်ဖက်က ကျန်သည့် နို့အုံကို စုပ်ကိုင်လိုက်၊ နို့သီးခေါင်းလေးကို ဖွဖွလေး ဆွဲလိမ်ကာ ပွတ်ချေလိုက် လုပ်နေရာ ယမင်းထွန်းခမျာ တဟင်းဟင်းနှင့် အဖျားတက်သလို ညည်းတွားနေသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အတာ၏ လက်တစ်ဖက်သည် ယမင်းထွန်း၏ ပေါင်ကြားသို့ ရောက်သွားသည်။ နို့စိုရင်း အောက်ခံဘောင်းဘီလေးထဲ လက်လျှိုကာ စောက်ပတ် အကွဲလေးကို ပွတ်သပ် ကိုင်တွယ်နေရာ ယမင်းထွန်း၏ ကိုယ်လုံးလေး ကော့ကော့လာသည်။ အတာသည် နို့စို့ခြင်းကို ရပ်လိုက်ပြီး ယမင်းထွန်း၏ အောက်ခံဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်လိုက်သည်။ ယမင်းထွန်းလည်း အလိုက်သင့် ဖင်လေးကို ကြွပေးသည်။ ဒူးထောင်ကာ ပေါင်ဖြဲထားသော ယမင်းထွန်း၏ ပေါင်ကြားမှ အရည်များ စိမ့်ထွက်နေသည့် စောက်ဖုတ် ဖေါင်းဖေါင်းကြီးက အတာ ဟူသော အခြောက်မ၏လီးကို အစွမ်းကုန် တောင်စေသည်။
ယမင်းထွန်း၏ ပေါင်ကြားသို့ ခေါင်းလျှိုကာ စောက်ပတ် အကွဲလေးကို လျှာဖြင့် ပင့်သပ်ရ လျှက်လိုက်သည်။ “ အ .. အတာ .. အို .. အဟင့် ” မျှော်လင့် တောင့်တနေသော လုပ်ရက်ကြောင့် ယမင်းထွန်းခမျာ ဖင်ကြီး ကြွတက်လာသည်။ “ ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ် အအအအ ပလပ်ပလပ်ပြွတ်ပြွတ် အားးး ရှီးးးး အတာရယ် ကောင်းလိုက်တာ .. အိုးး…. ” အတာသည် ယမင်းထွန်း၏ စောက်စိလေးကို စုပ်လိုက်၊ စောက်ပတ်ကို လျှက်လိုက်၊ စောက်ခေါင်းထဲ လျှာဖြင့် ထိုးမွှေလိုက် လုပ်နေရာ ယမင်းထွန်း တစ်ကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်ကော့လန်ကာ နေသည်။ ယမင်းထွန်းသည် သူမ၏ လက်များဖြင့် သူမ နို့အုံနှစ်ဖက်ကို စုပ်နယ်ရင်း အတာ စောက်ပတ်လျှက်ပေးသည်ကို ဇိမ်ကြသွားသည်။ အတာကလည်း စောက်ပတ်လျှက်ရင်း ယမင်းထွန်း၏ ပွစိပွစိ ဖြစ်နေသော စအိုပေါက်လေးကို လက်ညှိုးဖြင့် ပွတ်သပ် ကလိနေသည်။ ပြီးနောက် စအိုပေါက်လေးအား လျှာဖြင့် ထိုးမွှေ ကလိပေးလိုက်ရာ “ အား.. ရှီးး.. အတာရယ် …. ဟူးး.. ” စအိုပေါက်ကို ကလိနေသော လက်ညှိုးက တစ်ဖြည်းဖြည်းနှင့် စအိုထဲ လက်တစ်စစ်ခန့် ဝင်လာသည်။ စအို ကြွက်သားများ၏ ညှစ်အားကြောင့် လက်ညှိုးသွင်းရတာ ကျပ်ထုပ်နေသည်။
ဖင်မခံရတာလည်း ကြာပြီလေ။ ထို့ကြောင့် အတာသည် စအိုပေါက်ကို တံတွေး ထွေးလိုက်ပြီး လက်ညှိုးကို ထိုးလိုက်ရာ လက်တစ်စစ်ကျော်ကျော် ဝင်သွားသည်။ “ အ . အတာ ” စအိုပေါက်ထဲဝင်သွားသော လက်ညှိုးကို မွှေရင်း စောက်ပတ်ကို ပြန်လျှက်ပေးလိုက်ရာ “ အင်းဟင်းဟင်း ရှီးး.. အအအအ အားး… ရှီး.. ဟားး… ” အတာ၏ ဆရာကျကျ ကိုင်တွယ်မှုကြောင့် ယမင်းထွန်းခမျာ ကြာရှည် မထိန်းနိုင်ဘဲ ဖင်ကြီး ကြွလာပြီး စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်များ ထွက်လာသည်။ ယမင်းထွန်း တစ်ချီ ပြီးသွားပြီ။ ယခုလို ကျွမ်းကျင်စွာ ပြုစုတက်မှုကြောင့်ပင် အတာ့ထံ ရောက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ “ အတာ့ အခန်းထဲ သွားရအောင် ” “ အင်း ” အခန်းထဲ ရောက်သည်နှင့် ယမင်းထွန်းသည် ပတ်လတ်လေး လှဲကာ ဒူးထောင် ပေါင်ကားပေးထားသည်။ လှည်းအိပ်ရင်း အဝတ်များချွတ်နေသော အတာ၏ ပေါင်ဂွစုံက ပေါ်ထွက်လာမည့် အရာကိုသာ ငံ့လင့်နေမိသည်။ အတာ၏ လီးက ” ၆ ခန့် ရှည်ပြီး လုံးပတ်မှာ အချိုရည်ဗူးခန့် တုတ်သည်။ သူမယောက်ျား ကိုဝင်းနိုင်၏လီးထက် အများကြီး ကြီးသည်။ “ အတာ့လီးက ယမင်းရဲ့ စောက်ဖုတ်လေးကို တောင့်တနေတာ ကြာပေါ့ ” ပြောရင်းဆိုရင်း ယမင်းထွန်း၏ ပေါင်ကြားသို့ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်သည်။ ပြီးနောက် လီးကို လက်ဖြင့်ကိုင်ကာ စောက်ပတ်ပေါက်တွင် တေ့လိုက်ပြီး ကော့သွင်းလိုက်သည်။
“ ဇွိ …. အ ” လီးဒစ် ဝင်သွားသည်နှင့် ယမင်းထွန်း၏ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပုခုံးပေါ်ထမ်းတင်ကာ ကိုယ်ကို ကိုင်းလိုက်ရာ၊ ယမင်းထွန်း၏ ဖင်ကြီး ကြွလာပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်း မိုးပေါ် ထောင်သွားသည်။ “ အင့် .. ဗျွတ်ဗျွတ် ဗွတ်ဗွတ် ဒုတ် .. အား.. သေပါပြီ အမေရဲ့ ..’သေပါပြီ .. သေပါပြီ .. အောင့်လိုက်တာ .. အတာရယ် .. ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ် ” အားဖြင့် ဆောင့်ချလိုက်ရာ အရည်များ ရွှဲဆိုနေသော စောက်ပတ်လေးထဲ ဧရာမ လီးကြီးမှာ သားအိမ်အား အရှိန်ဖြင့် ဝင်ဆောင့်သဖြင့် အတော်လေး အီသွားသည်။ “ အင့်အင့်အင့်အင့် ဗျွတ်ဗျွတ်ဗွတ်ဗွတ် အူးဟူးး ဟူးးး ဗျိ..ဗျစ်. .. အားး .. အတာ .. ဖြေးဖြေး .. အအအအ ” စောက်ပတ်လေးမှာ စီးပိုင်ပြီး အတွင်းသား နုနုများက ညှစ်ထားသလို ဖြစ်နေရာ လိုးရတာ အရသာရှိလှသည်။ ယမင်းထွန်းခမျာ လီးဝင် လီးထွက် ကြမ်းလွန်း၍ နာကျင်မှုကြောင့် လှိမ့်ခံနေရသည်။ အတာ၏ ဆောင့်ချက်တွေက ပြင်းထန်လွန်းလှသည်။
ဆောင့်ချက် ပြင်းလွန်း၍ ရမ်းခါနေသော နို့အုံကြီးများကို လက်ဖြင့် အားရပါးရ ဖျစ်ညှစ်ပြီး လိုးနေသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် စောက်ပတ်ထဲ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ဝင်ထွက်နေသည့် လီးကြီးအားခံနိုင်ရည်ရှိလာသည်။ ခံလို့ ကောင်းလာသဖြင့် အောက်မှနေ၍ ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ပေးသည်။ အတာလည်း အရှိန်မြှင့်၍ ဆောင့်ချက်တွေ ပိုမို ပြင်းထန်လာရာ “ အအအအ ဗျိ..ဗ..အ..အ .. ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖတ် .. အင့်အင့်အင့်အင့် .. အား… ရှီးး.. ” အချက် ၃၀ ခန့် အားရပါးရ လိုးပြီးသော် အတာ၏ သုပ်ရည်များ ယမင်းထွန်း၏ စောက်ခေါင်းထဲ ပန်းထုပ်လိုက်သည်။ သုပ်ရည် ချွဲချွဲပျစ်ပျစ်များ ဝင်လာသည်နှင့် ယမင်းထွန်း၏ စောက်ပတ်လေးလည်း ပွစိပွစိဖြစ်ကာ အရည်များ ညှစ်ထွက်လာသည်။ နှစ်ယောက်သား ပြိုင်တူ ပြီးသွားသဖြင့် အတာသည် မောမောနှင့် ယမင်းထွန်းကိုယ်ပေါ် မှောက်အိပ်လိုက်သည်။ ယမင်းထွန်းလည်း အတာ့အား တင်းကျပ်စွာ ဖက်ထားလိုက်သည်။
ထိုနေ့က အတာနှင့် မီးကုန်ယမ်းကုန် နှစ်ပါးသွားခဲ့ရာ လူလည်း နုံးချိနေပြီ။ ညနေဆောင်း အိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့် ရေချိုးပြီး အိပ်ယာ တန်းဝင်ခဲ့သည်။ ယောက်ျားဖြစ်သူ မရှိခိုက် ငတ်မွတ်နေသော ရမ္မက်စိတ်လည်း ဖြေသိမ့်နိုင်ခဲ့ပြီလေ။ ခိုင်သုတသည် အန်တီလေး၏ အခန်းအား အသာ ဟ၍ ကြည့်လိုက်ရာ တစ်ဆောင်းကွေးကာ အိပ်နေသော ယမင်းထွန်း၏ ဖင် လုံးလုံးကြီး နှစ်ခြမ်းကို တွေ့ရသဖြင့် မယိုးမရွ ဖြစ်သွားသည်။ သူ့ကိုယ်သူ ယောက်ျားလေးဟု ခံယူထားသော ခိုင်သုတတစ်ယောက် ယမင်းထွန်း၏ ထားကျိုင်းသော နို့အုံနှင့် ဖင်ကြီးတွေကို ပစ်မှားနေမိသည်။ အန်တီလေးကို ဘယ်လို ကျုံးသွင်းပြီး ဝင်လုံးရမလဲဟု စဉ်းစားနေသည်…..။ပြီးး..